Eye Twitching (မျက်ခွံအကြောလိုက်ခြင်း) - Hello Sayarwon
Eye Twitching (မျက်ခွံအကြောလိုက်ခြင်း)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Eye Twitching (မျက်ခွံအကြောလိုက်ခြင်း)
Eye Twitching (မျက်ခွံအကြောလိုက်ခြင်း) ကဘာလဲ။
သင့်မျက်ခွံတွေ ထိန်းချုပ်လို့မရဘဲ အလိုလျောက် လှုပ်နေတာကို မျက်ခွံအကြောလိုက်တယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အပေါ်၊အောက် မျက်ခွံနှစ်ခုလုံးမှာ ဒီလိုအကြောလိုက်တာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် အပေါ်မျက်ခွံမှာပဲ အဓိက ဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။ လူအများစုအတွက် ဒီလိုအကြောလိုက်တာဟာ မသိမသာဖြစ်ပြီး မျက်ခွံလေးတချက်အသာလေး လှုပ်သွားတယ်လို့ပဲ ခံစားရလေ့ရှိပါတယ်။ တချို့တွေကျပြန်တော့လည်း မျက်ခွံအကြောဆွဲတာ အတော်ဆိုးတဲ့အတွက် မျက်လုံးကို လုံးဝမှိတ်ထားလိုက်ရတာမျိုးလည်း ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ တချို့လူတွေမှာ ဒါမျိုးဘယ်တော့မှ ဖြစ်ပေါ်လေ့မရှိပါဘူး။
Eye Twitching (မျက်ခွံအကြောလိုက်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
အောက်ပါအချက်တွေက မျက်ခွံအကြောလိုက်အောင် ဆွပေးနိုင်ပါတယ်။
မျက်စိအသား ဒါမှမဟုတ် မျက်ခွံအတွင်းပိုင်းမှာ နေမထိထိုင်မသာ ဖြစ်ခြင်း
Eye Twitching (မျက်ခွံအကြောလိုက်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ။
မျက်ခွံမှာ ရှိတဲ့ကြွက်သားတွေ ထိန်းချုပ်လို့မရဘဲ တဆတ်ဆတ်လှုပ်နေခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်အချိန်မှာ ဆေးကုသမှု ခံယူသင့်သလဲ။
မျက်ခွံအကြောလိုက်တာဟာ ကာလကြာရှည်ဖြစ်နေတယ် ဒါမှမဟုတ် အောက်ပါဝေဒနာတွေပါ ခံစားနေရပြီဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ ပြသင့်ပါပြီ။
မျက်လုံးနီရဲ၊ရောင်ရမ်းနေမယ် ဒါမှမဟုတ် ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ အရည်တွေ ထွက်နေမယ်။
မျက်ခွံအကြောလိုက်တာ ရက်သတ္တပတ်အတော်များများ ကြာမယ်။
မျက်ခွံသာမက မျက်နှာရဲ့ တခြားနေရာတွေမှာ အကြောဆွဲလာမယ်။
မျက်ခွံ (အထူးသဖြင့် အောက်မျက်ခွံ) အတွင်းဖက် ဝင်နေခြင်း
ရှားရှားပါးပါးဆိုသလို မျက်ခွံအကြောလိုက်ခြင်းဟာ အချို့သော ဦးနှောက်နဲ့ အာရုံကြောဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေရဲ့ လက္ခဏာလည်း ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ အခြေအနေမျိုးတွေမှာဆိုရင် တခြားရောဂါလက္ခဏာတွေလည်း ကျိန်းသေပေါက်နီးနီး ပြသနိုင်ပါတယ်။ မျက်ခွံအကြောလိုက်ခြင်းကို ဖြစ်စေတဲ့ ဦးနှောက်နဲ့ အာရုံကြောဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေက
Bell’s palsy (မျက်နှာတခြမ်းရွဲ့တာ)။
Multiple sclerosis လို့ခေါ်တဲ့ ဦးနှောက်နဲ့ အာရုံကြောရောဂါတမျိုး။
မျက်နှာ၊မေးရိုး၊လျှာ တို့မှာရှိတဲ့ ကြွက်သားတွေ အကြောလိြုက်ခင်း။
Tourette syndrome လို့ခေါ်တဲ့ မူမမှန်လှုပ်ရှားမှုတွေ၊အသံထွက်တာတွေ ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ ရောဂါ။
ဒီပြဿနာဟာ အမျိုးသမီးတွေမှာ ပိုပြီး အဖြစ်များပြီး လူလတ်ပိုင်းနဲ့ အသက်ကြီးပိုင်းတွေမှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
မျက်ခွံအကြောလိုက်ခြင်းက ဘယ်လိုနောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာတွေကို ဖြစ်စေနိုင်သလဲ။
ရှားရှားပါးပါးဆိုသလို မျက်ခွံအကြောလိုက်ခြင်းဟာ အချို့သော ဦးနှောက်နဲ့ အာရုံကြောဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေရဲ့ လက္ခဏာလည်း ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ အခြေအနေမျိုးတွေမှာဆိုရင် တခြားရောဂါလက္ခဏာတွေလည်း ကျိန်းသေပေါက်နီးနီး ပြသနိုင်ပါတယ်။
သင့်ဆရာဝန်အနေနဲ့ သင့်မျက်လုံးကို မျက်မြင်စစ်ဆေးမှာဖြစ်ပြီး သင်ခံစားနေရတဲ့ ဝေဒနာတွေကို ပြောပြခိုင်းမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မျက်ခွံအကြောလိုက်တာဟာ သူ့အလိုလို ပျောက်ကွယ်သွားလေ့ရှိပါတယ်။ တကယ်လို့ မျက်လုံးခြောက်တာ ဒါမှမဟုတ် မျက်လုံးထဲ နေမထိထိုင်မသာဖြစ်ခြင်းဟာ မျက်ခွံအကြောလိုက်ရခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် မျက်ရည်တုနဲ့ မျက်စဉ်းခတ်ပါ။ ဒီလိုလုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့် သိပ်မဆိုးရွားတဲ့ အကြောလိုက်တာမျိုးကို သက်သာပျောက်ကင်းစေပါလိမ့်မယ်။ အသုံးများဆုံး ကုသမှုကတော့ botulinum toxin (Botox၊ Dysport ၊ Xeomin) ထိုးတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်နှာတခြမ်း အကြောလိုက်တဲ့ အခြေအနေတွေကို ကုသပေးဖို့ သုံးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး လအနည်းငယ်ခံပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ဆေးရဲ့အာနိသင်ပြယ်လာရင်တော့ နောက်အကြိမ်တွေ ထပ်ထိုးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ သိပ်မပြင်းထန်တဲ့ အခြေအနေတွေမှာ အောက်ပါဆေးတွေကို သောက်ဖို့သင့်ဆရာဝန်က ညွှန်ကြားပါလိမ့်မယ်။
Trihexyphenidyl hydrochloride (Artane၊ Trihexane၊ Tritane)
အခြေအနေပိုဆိုးတဲ့ လူနာတွေအတွက်မျက်ခွံမှာရှိတဲ့ ကြွက်သားနဲ့ အာရုံကြောအချို့ကို ဖယ်ရှားတဲ့ ကုသမှုမျိုးကို ပြုလုပ်ရပါမယ်။ သင့်မျက်နှာကြွက်သားတွေကို ဖြေလျှော့ပေးနိုင်ဖို့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုလည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ ဒီလိုအကြောဆွဲတာဟာ ပိုပြီးစိတ်လာတယ်ဆိုရင် သင့်အနေနဲ့ သူတို့ဖြစ်လာတတ်တဲ့ အချိန်တွေကို စာအုပ်တအုပ်ထဲမှာ မှတ်သားထားရပါမယ်။ သင်သောက်တဲ့ ကဖင်းဓါတ် နဲ့ အရက်ပမာဏ၊စိတ်ဖိစီးမှု အခြေအနေ၊ ဒီလိုအကြောမဆွဲခင်ကာလတွေနဲ့ အကြောဆွဲနေစဉ်ကာလတွေမှာ အိပ်ချိန်ဘယ်လောက်ရသလဲ စတာတွေကို မှတ်သားထားရပါမယ်။ တကယ်လို့ သင်အိပ်ရေးမဝတဲ့ အချိန်တွေမှာ မျက်ခွံအကြောဆွဲတာမျိုး ပိုဖြစ်တတ်တယ်ဆိုရင် သင့်မျက်ခွံကို အနားပေးဖို့နဲ့ အကြောဆွဲတာကို လျှော့ချပေးနိုင်ဖို့အတွက် နာရီဝက်ကနေ တစ်နာရီစောပြီး အိပ်ရာဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Why Does My Eye Twitch? http://www.webmd.com/eye-health/why-your-eyes-twitch.
Eye twitching. http://www.mayoclinic.org/symptoms/eye-twitching/basics/definition/sym-20050838. Accessed September4th , 2016.
Eyelid Twitch. http://www.healthline.com/health/eyelid-twitch#Overview1. Accessed
ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း, အလှအပနှင့်မိတ်ကပ်, အလှအပ
မျက်ခွံတွေမို့အစ်တာ အလှမပျက်အောင် ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ
Blepharoplasty (မျက်ရစ်ဖော်ရန် ခွဲစိတ်ခြင်း)